Izakhiwo ezingezona ezijwayelekile ezihlanzekile - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Okungekho Standard Standard Bearings Surface ihlanzekile
Ukufaka indlela yokuvimbela ukugqwala
1) ukuhlanzwa kwendawo: ukuhlanza kumele kusekelwe esimweni sokugqwala nemibandela ngaleso sikhathi, khetha indlela efanele. Indlela evame ukusetshenziswa ngayo i-solvent yokuhlanza, ukwelashwa kwamakhemikhali ukuhlanza indlela nendlela yokuhlanza imishini.
2) Ukuhlanza okumile kungasetshenziswa ngemuva kokomisa umoya omile omile, noma owomile we-120 ~ 170 â "ƒ owomile, ungasetshenziswa isirayi esomile esomile.
Ihlanganiswe ne-anti-rust oil method
1) indlela yokucwiliswa: ezinye izinto ezincane ezigcoba amafutha okugqwala, ukuze ukunamathela kwendlela yokulwa ne-rust grease. Ukuqina kwefilimu yamafutha kungatholakala ngokulawula izinga lokushisa noma i-viscosity ye-greust-proof grease.
2) ukuxubha indlela akufanelekile ukucwiliswa noma ukuchithwa kwemishini yokwakha yangaphandle noma ukuma okwenziwe umkhiqizo, ukushayela akufanele nje kugxile ekuqoqeni, kepha nokuvimbela ukugaya ukuvuza.
3) Indlela yokufiphaza Ezinye izinto ezinkulu zokukhwabanisa azikwazi ukugcoba ngamafutha, ngokuvamile zine-0.7Mpa filter filtered air compressed endaweni yokuhlanza emoyeni yokupuniza. Hlanganisa indlela yokwenza i-dilution uhlobo lwe-anti-rust oil noma ungqimba omncane wamafutha okulwa nokugqwala, kodwa kufanele usebenzise izinyathelo zokuvikela umlilo kanye nokuvikela abasebenzi.
Yiziphi izici eziyinhloko ezithinta ukubola kwesimbi?
Ukushisa komzimba kubangelwa yizinto ezihlukahlukene zangaphakathi nangaphandle, okufingqiwe ngokuyinhloko:
'izinsimbi zensimbi, ukwakheka kwamakhemikhali nokwakhiwa kwazo; ukungenisa izintambo zokufaka izikhonkwane zilezi: ukufaka izicelo, ukuveza umbuzo wemodeli, uhlobo oluthwalayo, uhlobo oluthwalayo, ama-bearings, ama-model aphethe uDaquan, ephethe ulwazi.
â'¡ metal surface finish (oxygen imfucuza umehluko ibhethri ukubola);
â ¢ ¢ nokuxhumana kwensimbi nokubunjwa kwesisombululo kanye nenani le-pH; I-China Bearing Network Izinhlobo ezivamile: izintambo ezinamafutha, ukugcwalisa okugcwele ama-roller bearings, nezinsimbi eziphephile, izibhebhe zokugaya, ukufaka ama-roller bearings, ama-bearings ama-spherical, ama-bear bearing bearings, ama-ball bearing, ama-bear bearing.
Ukushisa kwamazinga okushisa kanye nomswakama;
â'¤ ngensimbi yensimbi exhumana nezinhlobonhlobo zemithombo yezemvelo.
Kungani ukujuluka kungabangela ukubola kwesimbi?
I-sweat yomuntu ingenakubala okungabalabala noma elula nge-asidi ebuthakathaka yetshezi, inani layo le-pH elingu-5 kuya ku-6. Ngaphezu kokuqukatha i-sodium, i-potassium, i-calcium, i-magnesium, kodwa futhi iqukethe inani elincane le-urea, i-lactic acid, i-citric acid kanye nezinye i-acids eziphilayo. Lapho ukuthukumeza nokuxhumana kwensimbi, indawo yensimbi iyokwenza uhlaka lwefilimu yokujula, ifilimu yokujula iyobangela imiphumela ye-electrochemical yensimbi, ukubola kwesimbi.
Abantu abakhukhumezayo abanakugwemeka, ukuvimbela ukujuluka kwesandla okubangelwa ukubola, abasebenzi abakhiqizi kumele balethe amagilavu, amasethi omunwe, noma sebenzisa amathuluzi akhethekile ukuthatha izingxenye, ungaxhumani nomkhiqizo.